Sun, May 31, 2020 at 8:54pm
काठमाडाैं २२ माघ। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा मङ्गलबार फोरजी जडान र परीक्षण सम्पन्न भएसँगै देशका ७७ जिल्लाकै प्रमुख स्थानमा यसको पहुँच विस्तार भएको छ । गत वर्ष माघ २० गते एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता अनुसार नै यसको पहुँच बढाइएको प्रबन्धनिर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्गलबारको सफलतासँगै देशैभर फोरजी नेटवर्क विस्तार गर्नेमा टेलिकम पहिलो र सबैभन्दा..
काठमाडौं, माघ १९ भारतको लोकप्रिय रेडियो बीबीसी हिन्दी सेवा बन्द भएको छ । जनवरी ३१ तारिखमा अन्तिम कार्यक्रम गर्दै रेडियो बन्द भएको हो । सन् १९४० को मे ११ तारिखमा सुरु भएको यो रेडियोलाई एक वर्ष अघिदेखि नै बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । रेडियोको लोकप्रियता र सुन्ने स्रोताको संख्या घट्दै गएकाले रेडियो बन्द गर्नु परेको बीबीसीले जनाएको छ । रेडियो बन्द..
सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापनको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाहिर गएर गरे कारबाही भोग्नुपर्ने भएको छ। ‘अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।’ राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत पैसा तिर्दा वा लिँदा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्न भनेको हो।..
काठमाडाैं, १८ माघ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा गरीने विज्ञापनमा कडाइ गरेकाे छ । तर, अबदेखि यस्ता सञ्जालहरूमा विज्ञापन गर्न नपाइने भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, ट्विटरलगायतमा विज्ञापन गर्ने क्रम बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै अबदेखि त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नगर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले अबदेखि फेसबुक,..
काठमाडौँ, १७ माघ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, कानून, निष्ठा एवं आदर्शअनुरुप नै सञ्चारसम्बन्धी ऐन÷कानून बनाउने बताउनुभएको छ । नेपाल टेलिभिजनको इटहरी प्रसारण केन्द्रको आज भिडियो कन्फेरेन्समार्फत उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक समाज र मिडिया क्षेत्रका हरेक जायज सरोकार र मागहरुलाई जनताको सरकार भएको हैसियतमा वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, ग्रहण गर्ने र सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँदै त्यसमा कुनै प्रकारको..
हुम्ला, १७ माघ हुम्ला जिल्ला एडिएसलाइन नहँुदा इन्टरनेट विहीन भएको छ । हुम्ला जिल्लामा करीब एक महिनादेखि एडिएसलको इन्टरनेट जाँदा यहाँका सरकारी कार्यालय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र बैंकहरुमा समस्या आएको स्थानीयवासी बताउँछन् । हुम्लामा सञ्चालित एक मात्र सेवा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन जडान भएका कार्यालय गाउँपालिका, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, विद्यालय, जडान गरिएका बैंकमा मात्र कामकाज सहज भएको बताइएको छ । ..
काठमाडौँ, १५ माघ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल युट्युव तथा फेसबुकबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सवैलाई थाहा छ । तर कसरी पैसा कमाइन्छ भन्ने सवैलाई जानकारी हुँदैन । फेसबुक विश्वकै नम्बर एक सामाजिक सञ्जाल हो । यसमा करिब १.३ विलियन प्रयोगकर्ताहरु विश्वभरबाट जोडिएका छन्। प्राय यसका प्रयोगकर्ताहरुले दिनमा एक पटक फेसबुक खोलेकै हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो व्यापार व्यसाय र उत्पादनको बारेमा विश्वलाई जानकारी..
काठमाडौं १५ माघ । के तपाईं कुनै पनि रोजगारीको अवसर नपाएर हैरान हुनुहुन्छरु अब चिन्ता नगर्नुस्, आक्समी म्यानेजमेन्टले यहि माघ १५ र १६ गते दुई दिनसम्म नेपालमै पहिलो पटक भर्चुअल जब फेयर सञ्चालन गर्ने भएको छ । इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै मोबाइल तथा कम्प्युटरबाट नै जागिरको खोजी गराउन आक्समी कन्सल्ट डटकममा भर्चुअल जब फेयर सञ्चालन गर्न लागिएको हो । कर्पोरेट क्षेत्र, बैंक, बीमा,..
काठमाडाैं ९ माघ। अईफोन निर्माता कम्पनी एप्पलले अत्यन्तै कम मूल्यमा आइफोन बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन्। केहि सम देखी अनुमान गरिए अनुरुप नै एप्पलले यस वर्षको मार्च महिनामा एक सस्तो आईफोन 'आईफोन एसई २' वा 'आईफोन ९' बजारमा ल्याउने सम्भावना बलियो बनेको छ। ब्लूमबर्गले 'अब हामीसंग विश्वास गर्ने अझ बढी आधारहरु छन्' भन्दै आईफोनको उत्पादकले यसको ठूलो उत्पादन अर्को महिना भन्दा..
एजेन्सी ९ माघ। यदि तपाई अत्यधिक माेवाइल चलाउने आदतबाट छुटकारा पाउन चाहनु हुन्छ ? यदी त्यसो हो भने गुगलले माेवाइलकाे लत हटाउने तीनवटा नयाँ एपहरु विकास गरिदिएको छ। सामान्यतया हामीले देख्ने गरेका एपहरुले सो एप प्रयोगकर्ताले धेरै भन्दा धेरै समय चलाउन् भन्ने चाहन्छन् तर गुगलले त्यसको विपरीत फोन प्रयोगको समय कटौती गराउने तीनवटा एप प्लेस्टोरमा राखीदिएको छ। यसबाट हामीलाई कम्प्युटर..
सिमकोट, ८ माघ हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटसहित आसपासका क्षेत्र २२ दिनदेखि सञ्चारविहीन बनेका छन् । जिल्लामा एडिएसएल सेवा नचले पनि जिल्लाका सरोकार निकाय नेपाल टेलिकम शाखाले ध्यान दिएको छैन । पहिले कालीकोटको महाबु लेकको रिपिटर टावरमा चट्याङले बिगारेको भए पनि अहिले कम विद्युत् सामथ्र्यका कारण समस्या आएको टेलिकमले भन्दै आएको छ । टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि शाखा कार्यालयले ध्यान नदिएको..
काठमाडौँ, ८ माघ आफ्ना ग्राहकको सहजताका लागि नेपाल टेलिकमले अनलाईनबाटै हरेक महिनाको बिल हेर्न मिल्ने सुविधा प्रदान गरेको छ । टेलिकमले ल्याण्डलाइन तथा मोबाइलबाट भएको खर्चको हरेक महिनाको बिल अनलाइनबाटै हेर्ने सुविधा थप गरेको हो । जसमा जीएसएम, पीएसटीएन र सीडीएमएको बिल हेर्न सकिने छ । यसका लागि सेवाग्राहीले नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा गएर दायाँतर्फ रहेकोण् ‘यूटिलिटी’ भित्र रहेको ‘अनलाईन मोबाइल बील’ मा क्लिक..
काठमाडौं, ८ माघ । एनसेल प्रालिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा विदेशी पर्यटकरुलाई ‘टुरिस्ट सिम’ दिने भएको छ । विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकले अब एनसेलको नयाँ योजना ‘टुरिस्ट सिम’मार्फत कम्पनीका विशेष सेवाबाट फाइदा लिन सक्ने छन् । एनसेलले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा ल्याएको योजना माघ ८ गते बुधवारबाट सञ्चालनमा आएको हो । योजनाअन्तर्गत भ्रमणमा आएका विदेशी..
काठमाडौं, १ पुस । मंगलबारदेखि विन्डोज–७ अपरेटिङ सिस्टम बन्द भएको छ । विन्डोज–७ बन्द भएपछि माइक्रोसफ्टले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई जतिसक्दो चाँडो सिस्टम अपग्रेड गर्न आह्वान पनि गरेको छ । नयाँ प्रविधिमा ’फोकस’ हुने भन्दै कम्पनीले विन्डोज–७ बन्द गरेको हो । करिब दुई वर्षअघि नै कम्पनीले यसबारे जानकारी भने दिएको थियो । विन्डोज–७ बन्द भएसँगै प्रयोगकर्ताले कुनै पनि महत्वपूर्ण सेक्युरिटी अपडेट र उपकरण..
काठमाडौँ, २९ पुस आजदेखि माइक्रोसफ्टले विन्डोज ७ अपरेटिङ सिस्टमलाई सपोर्ट नगर्ने भएको छ । ११ वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको विन्डोज ७ अपरेटिङ सिस्टमका लागि अपडेट तथा सेक्युरिटी प्याचेज उपलब्ध नगराउने माइक्रोसफ्टले बताएको हो । यसबाट लाखौं मानिसहरु प्रभावित हुने बताइएको छ । साइबर सुरक्षा विज्ञहरुले विन्डोज ७ युजर्सलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अपग्रेड गर्न आग्रह गरेका छन् । माइक्रोसफ्टले आज (मंगलबार) देखि विन्डोज ७..
काठमाडाैं, २९ पुस । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेपछि चैतबाट शुल्क घट्ने भएको छ । गत भदौमा ल्याइएको निर्देशिकालाई हालै संशोधन गर्दै प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई तीन महिनाभित्र नयाँ व्यापारिक योजना बनाउन निर्देशन दिएको हो । अन्तरआबद्धता निदेर्शिकाअनुसार उपभोक्ताले टेलिफोन गर्दा एकले अर्काको मोबाइल नेटवर्क प्रयोग गरेबापत प्रतिमिनेट १० पैसाभन्दा बढी..
एजेन्सी, २७ पुस । अष्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरुले एउटा नयाँ किसिमको ब्याट्री निर्माण गरेका छन् जसले कुनै पनि स्मार्टफोनको चार्ज पाँच दिनसम्म टिकाइ राख्न सक्ने र विद्युतिय गाडिलाई १ हजार किलोमिटरसम्म कुद्ने ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ । यसरी प्राविधिक क्षेत्रमा यो ब्याट्री प्रयोगमा आए वातावरणमैत्री र प्रभावकारी ऊर्जाको हिसाबले यो उपलब्धी ऐतिहासिक हुने बताइएको छ । यस अनुसन्धानका लागि..
काठमाडौँ, २६ पुस नेपाली काँग्रेसले टेलिकम कम्पनीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काँग्रेसले आज एक विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने जनाएको हो । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति वर्तमान सरकारले पनि पछ्याएकामा त्यसमा कुनै विमति नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिँदा प्रतिस्पर्धी कम्पनी..
काठमाडौं, २४ पुष समयमै शुल्क नदिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज निर्णय सरकारले बदर गरेको छ। व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालसहित समयमै शुल्क नदिएको भन्दै स्मार्ट टेलिकम र वेब सर्फर कम्युनिकेसनको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय सरकारले खारेज गरेको हाे। खारेजीको निर्णय बदर गर्दै कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन प्राधीकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता..
काठमाडौं, पुस २२ अस्ट्रेलियाका अनुसन्धाताहरूले एउटा स्मार्टफोनलाई पाँच दिनसम्म चार्ज पुग्ने ब्याट्री विकास गरेको दावी गरेका छन् । उक्त ब्याट्रीको शक्ति एउटा बिजुली कारलाई एक हजार किलोमिटरसम्म चल्न पुग्ने हुने पनि बताइएको छ । यो प्रविधि व्यापक प्रयोगमा आए, यसले प्रभावकारी र हरित ऊर्जामा ठूलो योगदान दिनेछ । यस्तो शक्तिशाली ब्याट्री मेलबर्नको मोनास विश्वविद्यालयका टोलीले विकास गरेका हुन् । उनीहरूले यसलाई आजका दिनमा..
काठमाडौं, २४ पुस । अब मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्सबाट पनि सामान किन्न मिल्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो सेवाका लागि सहजीकरण गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेको निर्देशिका प्रमाणीकरण भइसकेको छ। मोबाइल ब्यालेन्स प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा एक पटकमा १ हजार रुपैयाँ र महिनामा १० हजार रुपैयाँसम्मका सामान तथा सेवा मोबाइलको ब्यालेन्स..
भक्तपुर, २३ पुस सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका कारण प्रेस स्वतन्त्रता माथि कुनै खतरा नरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ भक्तपुर शाखाको २३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधानको मर्मविपरीत प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था आए आफैँ राजीनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको पत्रकारिता देखेर कहिलेकाहीँ आफूलाई राजीनामा दिएर बस्न झोक चल्ने गरेको टिप्पणी गर्दै उहाँले..
काठमाडाैं, २० पुस । इरानका एक जना ह्याकरले अमेरिकाको सरकारी वेबसाइट ह्याक गरेका छन् । अमेरिकन फेडरल डिपोजिटरी लाइब्रेरी प्रोग्राम 'एफडीएलपी' लगइन गर्ने प्रयोगकर्ताले ‘इस्लामिक रिपब्लिक अफ इरान’ लेखिएको कालो ह्याक गरिएको वेब पेज देखिरहेका छन् । यसमा डोनल्ड ट्रम्पलाई इरान लेखिएको मुड्कीले गालामा हानिरहेको र ट्रम्पको मुखबाट रगत देख्न सकिन्छ । यसमा इरानियन ह्याकरले जिम्मेवारी लिएको बताएपनि इरानले नै अमेरिकाको यो सरकारी वेबसाइट ह्याक..
काठमाडौं, १८ पुस सन् २०२० मा छ वटा ग्रहण लग्दैछन् । जसमा दुई सूर्यग्रहण र चार चन्द्र ग्रहण रहेका छन् । चन्द्रग्रहण पहिलो चन्द्रग्रहण पौष २५ (१० जनवरी) मा लाग्नदैछ । सो चन्द्रग्रहण नेपालसहित भारत लगायतका देशबाट देख्न सकिनेछ। दोस्रो चन्द्रग्रहण २०७७ सालको जेठ २३ गते (५ जुन) मा लाग्नेछ । यो चन्द्रग्रहणको पनि नेपाललगायत छिमेकी देशबाट देख्न सकिनेछ । तेस्रो चन्द्रग्रहण २०७७ सालको..
काठमाडौँ, १७ पुस सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकका बारेमा नकारात्मक हल्ला फैलाइएको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार भेटमा उहाँले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता प्रत्येकलाई दर्ता हुनुपर्ने भनेर विधेयकका बारेमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभयो । “तथ्य छोप्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको देखियो, हरेक नागरिक दर्ता हुनुपर्ने होइन, सामाजिक सञ्जालमात्र दर्ता हुनुपर्ने हो”,..
काठमाडौँ, १७ पुस सन् २०१९ मा इतिहासमै पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्वीर सार्वजनिक भएको थियो । यसलाई सन् २०१९ को ठूलो एवं महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ । ब्ल्याक होल पृथ्वीबाट पाँच करोड ५० लाख प्रकाश वर्ष टाढा सुदूर आकाशगङ्गामा देखिएको थियो । यसको आकार सूर्यभन्दा ६५ अर्ब गुना ठूलो छ । ब्ल्याक होलको तस्वीर विश्वका आठ वटा टेलिस्कोपको नेटवर्कबाट खिचिएको थियो..
काठमाडाैं, १६ पुस । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले लाभकर बापत चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । निर्धारित कुल लाभकरलाई छ महिनामा किस्ता बापत बुझाउन पाउने सुविधा मागसहित कम्पनीले लाभकर बुझाएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको हाे । यसअघि २०७२ चैत २९ गते स्विडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत शेयर तत्कालीन बजार मूल्य अनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा मलेसियन..
कञ्चनपुर, १५ पुस सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विकास र समृद्धिका लागि सञ्चारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । आज कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा रहेको सामुदायिक रेडियो शुक्लाफाँटा एफएमको तेह्रौं वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले सञ्चारका माध्यमले सकारात्मक विषयलाई बढी जोड दिई समाचार प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारका माध्यम देशको पहरेदार भएकाले सधैंँ देश र जनताको हित हुनेगरी समाचार सम्प्रेशण गर्नुपर्ने..
काठमाडौँ, १५ पुस सर्च इन्जिन गुगलले यस वर्ष गुगलमा सर्वाधिक खोजी गरिएका विषयहरुको सूची सार्वजनिक गरेको छ । गुगल सर्च इन्जिनमा सर्वाधिक सर्च गरिएका विभिन्न विधाका शीर्षकहरुलाई गुगलले ग्लोबल लिष्ट अफ टप ट्रेण्डिङ सर्चको रुपमा सार्वजनिक गरेको हो । यस वर्ष भारत भर्सेज दक्षिण अफ्रिका भन्ने विषय विश्वभर गुगलमा सबैभन्दा धेरै खोजी गरिएको विषय बनेको छ । सायद भारत र दक्षिण अफ्रिकाबीचको..
काठमाडौँ, १४ पुस हालै प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार अन्य ब्राण्डका स्मार्टफोनहरूको तुलनामा आइफोन साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यधिक असुरक्षित भएको पाइएको छ । रिपोर्ट अनुसार एन्ड्रोइड स्मार्टफोनको तुलनामा आइफोन ह्याक हुने जोखिम १ सय ६७ गुणा अत्यधिक रहेको छ । स्मार्टफोनको खोल बनाउने बेलायती कम्पनी केस डट ट्वान्टीफोरले गरेको अध्ययनले आम धारणाविपरीत आइफोन निकै असुरक्षित रहेको देखाएको हो । बेलायती प्रयोगकर्ताले गर्ने गुगल सर्चको..
Results 780: You are at page2of 26